Home Wararka Qamri laga keenay Itoobiya oo lagu qabtay Gobolka Nugaal
Qamri laga keenay Itoobiya oo lagu qabtay Gobolka Nugaal
Taliyaha saldhiga degmada Buurtinle Laba xiddigle, Maxamuud Cabdiraxmaan Salaad (Miig) ayaa warbaahinta u sheegay in khamrigaas lagu qabtay degaanka Maygaagle oo ka tirsan Gobolka Nugaal, islamarkaana xiga dhanka xadka Itoobiya.
Laba xiddigle Maxamuud Miig, ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay afar nin oo mas’uul ka ahaa khamriga, kadib markii ay iska caabin ku sameeyeen Booliiska, iyadoo mid kamid ah raggaas uu dhaawac ka gaaray lugta.
“ Hawlgalka waxa lagu qabtay 576 dhalo oo khamri ah iyo afar nin oo mas’uul ka ahaa khamriga kana soo geliyay dhanka Itoobiya. Iska caabin ayay sameeyeen, waana ku guulaysanay in aan qabanno” ayuu yiri Taliyaha saldhiga degmada Buurtinle.
Taliyaha ayaa sheegay in ay Garsoorka hor-gayn doonaan Khamriga iyo shakhsiyaadka lagu soo qabtay, si loogu qaado sharciga.
Previous articleTalibaan oo laga cabsi qabo in muddo kooban ku qabsan karaan Caasimadda Kaabul
Next articleQabanqaabada qabashada Doorashada Aqalka Sare oo ka socota Dhuusamareeb
Xog: Qoddobka ugu adag ee illaa hadda hareeyey shirka doorashada
golihii wasiiradda Dalka Chile oo kala diray